भू–उपयोग नक्सा निर्माण बजेटको अभावमा १७ वर्षदेखि अलपत्र
निशान न्युज आश्विन २, 2074
काठमाडौँ । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनालाई चाहिनेजति बजेट नदिँदा भू–उपयोग नक्सा बन्न सकेको छैन । विसं २०५७ मा भूमिसम्बन्धी नक्सा तयार पार्ने उद्देश्यले आयोजना स्थापना गरिएको थियो । आयोजना स्थापना भएको एक दशकपछि मात्र नक्सांकन शुरु भयो ।१७ वर्षमा तराईका २० जिल्लाक...
प्रदेश नं २ मा ३ बजेसम्म ६३ प्रतिशत म...
आश्विन २, 2074 काठमाडौं । प्रदेश नं. २ मा जारी मतदानमा दिउँसो १ बजेसम्म ५३ प्रतिशत मत खसेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा ५३ प्रतिशत मत खसेको छ । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन परिचालन क...
आश्विन २, 2074 राजविराज, । प्रदेश नं. २ अन्तर्गत सोमबार भइरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाबाट एक नक्कली मतदाता पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँका १९ वर्षीय सञ्जय चौधरी रहेको प्रहरी उपरीक्षक...
निर्वाचनसँगै कार्यान्वयनमा सार्थकता :...
आश्विन २, 2074 काठमाडौँ । नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक जारी गरेको ‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयनको दुई वर्ष पुग्दा मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ । संघीयतासहितको नयाँ संविधानको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा स्थानीय ...
आश्विन २, 2074 कपिलवस्तु । विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिले कपिलवस्तुको ठूलो क्षेत्रफलको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । जिल्लाको कूल ६२ हजार २ सय ११ हेक्टर वनमध्ये १० हजार ६ सय ४४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जिल्ला वन...
मतदान गरेर घर फर्किंदै गर्दा मृत्युु
आश्विन २, 2074 धनुषा । प्रदेश नं २ मा तेस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा आज मतदान गरेर घर फर्किरहेको अवस्थामा एकजनाको बीचबाटोमै मृत्यु भएको छ । धनुषाको बटेश्वर गाउँँपालिकामा मतदान गरेर घर फर्किरहेका बटेश्वर गाउँपालिका–१ का अन्दाजी ५५ वर्षी...
गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयमा एक्सरे मे...
आश्विन २, 2074 कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिमकै प्रमुख भन्सार नाका गड्डाचौकीमा भन्सार कार्यालय स्थापना भएको ५५ वर्षपछि जाँचका लागि एक्सरे मेसिन जडान गरिएको छ । व्यापारिक नाका सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका सर्वसाधारण भारतका विभिन्न शहरमा मजदुरी गर्...
१ हजारको नक्कली नोट
आश्विन २, 2074 गोरखा । सदरमुकामका विभिन्न पसलमा १ हजार रुपैयाँको नक्कली नोट फेला पर्न थालेको छ । १ हजारको नक्कली नोट ग्राहकले विभिन्न सामग्री खरिद गर्दा झुक्याएर दिने गरेको पाइएको व्यापारीले बताएका छन् । पसलमा ग्राहकले नक्कली नोट दिएर ...
रौतहटको गमहरिया मतदान केन्द्रमा हवाइ ...
आश्विन २, 2074 रौतहट । रौतहट जिल्लाको मौलापुर नगरपालिकस्थित गमहरिया मतदान केन्द्रमा विवाद उत्पन्न भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाइ फायर गरेको छ। उल्टो सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलागेपछि त्यहाँ झडपको स्थिति भएको र स्थिति नियन्त्रणमा ल...
देउवा मन्त्री परिषदमा २ राज्यमन्त्री ...
आश्विन २, 2074 काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले विराज विष्ट र कमला शर्मालाई राज्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ । पार्टीले विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीमा विष्ट र वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्रीमा शर्मालाई सिफारिस गर...
आश्विन २, 2074 काठमाडौँ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत महोत्तरीको औरही नगरपालिकाकी ११६ वर्षीया सर्व्सियादेवी यादवले मतदान गरेकी छन् । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार बिहान नेपाल राष्ट्रिय निम्न...
माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव ...
आश्विन २, 2074 चितवन । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको बताए । उनले केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाटो बिराएकाले पार्टी एकता सम्भव नरहेको बताए । प्रचण्डले...
गोपाल खड्का आयल निगमको कार्यकारी निर्...
आश्विन २, 2074 काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदमुक्त गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्काले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमिता गरेको ठहर गर्दै सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्यकारी न...
चाडपर्वलाई मध्यनजर गरि मापसे जाँचलाई ...
आश्विन २, 2074 काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा मादक पदार्थ सेवन मापसे जाँचलाई कडाइ गर्ने भएको छ । चाडपर्वको समयमा धेरै मानिस मापसे गरेर सवारी चलाउने र दुर्घटना धेरै हुने गरेको भन्दै मापसेलाई क...
आश्विन २, 2074 काठमाडौं । बीमा समितिले अत्याधुनिक भवन बनाउने भएको छ । भवन निर्माणका लागि समितिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरेको छ । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागाईँले भवन निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि सं...
← अघिल्लो 12… 848 849 850 851 852 853 854 855 856 … 950 951 पछिल्लो →